တရားမအမှုများကို တရားရုံးဦးဆောင်၍ စေ့စပ်ဖြေရှင်းသည့် စမ်းသပ်အစီအစဉ် မတ် ၁ ရက်မှ စတင်ဖော်ေ?? - Yangon Media Group
တရားမအမှုများကို တရားရုံးဦးဆောင်၍ စေ့စပ်ဖြေရှင်းသည့် စမ်းသပ်အစီအစဉ် မတ် ၁ ရက်မှ စတင်ဖော်ေ??
တရားမ အမှုများကို တရားရုံးမှဦးဆောင်၍ စေ့စပ် ဖြေရှင်းသည့် စမ်းသပ်အစီအစဉ်အား မတ် ၁ ရက်မှစတင်ကာ အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြောသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက် နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန (MICC-2) တွင် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ် တော်ချုပ်မှပြုလုပ်သည့် တရားရုံးမှဦးဆောင် သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေး စမ်းသပ်အစီအ စဉ် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်း အခမ်းအနား၌ ¤င်းက ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”လာမယ့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် မတ် ၁ ရက် မှစတင်၍ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်တိုး ချဲ့အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် တရားမ မှုများတွင် တရားရုံးမှ ဦးဆောင်သည့်စေ့ စပ်ဖြေရှင်းရေး စမ်းသပ်အစီအစဉ်ကို ဦး စားပေး လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သွား မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ယင်းအစီအစဉ်ကို နေပြည်တော်နယ် မြေ ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံး၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ် တရားရုံး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တောင်ငူခရိုင်တရားရုံး၊ တောင်ငူမြို့နယ် တရားရုံးတို့တွင် စတင် အကောင်အထည် ဖော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
မြန်မာလူမျိုးတို့သည် အငြင်းပွားမှုများကို ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဖြေရှင်းသည့် ဓလေ့ ထုံးစံဖြင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသူများ ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ တရားမ မှုခင်းများတွင် တရားရုံးမှ ဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေး စနစ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် ပထမမဟာ ဗျူဟာ စီမံကိန်းကာလ (၂ဝ၁၅/၂ဝ၁၇)ကပင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒုတိယ တရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာ(၂ဝ၁၈/ ၂ဝ၂၂) တွင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် သတ်မှတ် ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
တရားရုံးမှဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေ ရှင်းရေး အစီအစဉ်တွင် မိသားစုမှုခင်း၊ ငွေ ရေးကြေရေး မှုခင်းနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးမှုခင်းများတွင် စေ့စပ်ဖြေရှင်းသွားမည် ဖြစ်ကာ စမ်းသပ်ကာလအဖြစ် တစ်နှစ်သတ် မှတ်ထားကြောင်း၊ တရားရုံးမှဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးနှင့် စမ်းသပ်အစီအစဉ် များ အကောင်အထည် ဖော်ရေးအတွက် ဂျပန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (JICA) ၏ ပူးပေါင်းကူ ညီမှုဖြင့် စတင် အကောင်အထည်ဖော်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ”အငြင်းပွားမှုများကို အခြားနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းသည့် နည်းစနစ်သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အများအပြားတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး ယင်းစနစ်သည် နိုင်ငံရှိ အများပြည်သူအတွက် တရားမျှတ မှု လက်လှမ်းမီရေးသာမက၊ စီးပွားရေးအ ခွင့်အလမ်းများအတွက်ပါ အရေးပါသော လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင် စုရှေ့နေချုပ်၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ် တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ၊ ပြည်သူ့လွှတ် တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကော်မရှင်၊ ကော်မတီများ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် နိုင်ငံတကာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာနယ် ပယ်မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
မျိုးသုဉ်းလုနီး စာဝါကျားငှက်မျိုးစိတ်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်ရန် စတင်
အမေရိကန် အော်ရီဂွန်မှ မွန်တားနားပြည်နယ် တစ်လျှောက် နှင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်၊ သစ်ပင်များလဲ
ရန်ကုန်မြို့ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုကိုရပ်တန့်ရန် အမှန်တကယ်အရေးယူဖို့ လိုအပ်ပြီ
”လျှာပေါ်မြက်ပေါက် ရင်တောင် ဟာသကား မရိုက်ဘူးဆိုပြီး ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း အခုတကယ်ပဲ လျှာပေါ်မြက
ယူ-၁၈ ပွဲစဉ် ကျင်းပခြင်းဖြင့် ဝှိုက်ဟတ်လိန်းကွင်းသစ်ကို စပါးမိတ်ဆက်၊ အိပ်မက်များ အကောင်အထည?
ဥပဒေစည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိခြင်းကြောင့် ပြန်လည် သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် မြေဧက တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းကျော် ထိရှိဟု ထုတ်ပြန်